Waxaa lagu yiri “Xijaabka siib ama dalkaaga ayaa lagugu celinayaa!”, balse way diiddey (Maxaa dhacay?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Waxaa lagu yiri “Xijaabka siib ama dalkaaga ayaa lagugu celinayaa!”, balse way...
(Hadalsame) 27 Nof 2021 – Haala Catiiq waxay aheyd gabar 13 jir ah oo u dhalatay dalka suuriya,
Sannadkii 1955-kii ayuu Aabaheed go’aan saday in isaga iyo qoyskiisuba u guuraan dalka Mareykanka.
Qoysku wuxuu ka koobnaa Caatiq, Xaaskiisa iyo saddex gabdhood oo ay dhaleen oo Haala Catiiq ugu yar tahay.
Diyaaradii ay soo raaceen waxay cagaha dhigatay magaalada Newyork, balse iyagu waxay rabeen inay uga sii ambabaxaan gobolka California oo ah meesha ay rabaan inay degaan.
Markay ka dageen garoonka Newyork ayaa hooyadii iyo saddexdeeda gabdhood laga dalbaday inay xijaabka iska bixiyaan si sawir looga qaado, kadibna loogu dhejiyo Green Card-ka.
Hooyadu marka hore way ka caga-jiiday balse markii dambe way ogolaatay.
Gabadhii u weyneyd gabdhaheeda iyadana wey ogolaatay in sawir laga qaado xijaab la’aan, gabadhii labaad iyadana way ogolaatay.
Kadib waxaa la soo gaaray gabadhii reerka u yareyd ee Haala catiiq, markii la yiri xijaabka iska bixi wey diiday, wax badan ayey gaaladii isku dayeen inay gabadha yar ku qanciyaan inay xijaabka iska siibto si sawirka looga qaado balse go’aankeedii ayey ku adkeysatay.
Waxay bilaabeen in ay ugu hanjabaan inay dalkeedii suuriya ku celin doonaan, haddii ay ogolaan waydo inay xijaabka iska bixiso.
Haala waxaas oo dhan dheg-jalaq uma siin.
Ugu dambeyn waxay go’aan sadeen in iyadoo xijaabkeeda wadata sawirka laga qaado, sidii baana la yeelay oo sawirkii looga qaaday laguna siiyey Kaarka Cagaaran ( Green card).
Waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee Green cardka sawirkeeda lagu dhejiyo iyadoo xijaaban.
Diyaaraddii ay rabeen inay sii raacaan ee California u socotay ayaa loo sheegay inay ka tagtay maadaama ay soo habsaameen.
Saacado kadib waxay warbaahinta ka maqleen in ay burburtay diyaaradii u socotay California ee ay markii hore rabeen inay raacaan.
Haala ayaa tiri: Fadliga ilaahay (sw) iyo xijaabka aan diiday inaan iska bixiyo ayuu ilaahay nooga badbaadiyey geeri.
Previous articleTOOS u daawo: Arsenal vs Newcastle United – LIVE (Shaxda Sugan)
Next articleMarkabkii ugu horreeyey oo kusoo xirtey Dekedda Garacad & qalabka uu sido + Sawirro